Loluphi ukhathalelo endilifunayo kuhlobo lolusu lwam? | Amadoda aQinisekileyo
Indoda nganye ineemfuno ezithile kulusu kwaye ngenxa yeso sizathu ifuna ezinye Unonophelo oluthile ngokwengxaki ekufuneka ujongane nayo. Amaxesha amaninzi asazi ukuba sizisombulule njani, kwaye into yokuqala ekufuneka siyifumene yile yenzekayo kulusu lwethu kunye nendlela esinokuyenza ngcono ngakumbi ngexesha elifutshane
1 Ulusu lwam lunamafutha, lunamafutha kakhulu
2 Ulusu lwam lomile, lomile kakhulu
3 Ulusu lwam luthuthuzela kwaye ludiniwe
4 Ndinemibimbi ebusweni bam
Ulusu lwam lunamafutha, lunamafutha kakhulu
Ukwazi ukuba ulusu lwakho lunamafutha beka iphepha elimnyama ebunzini lakho kwelinye kwizidlele zakho. Cinezela ngobunono kwaye uyisuse emva kwemizuzwana embalwa. Jonga kwaye ubone ukuba ishiya intsalela emhlophe. Ukuba kunjalo, ulusu lwakho lunamafutha.
Ulusu olunamafutha ulusu olunamaqhakuva, amabala amnyama, amabala amnyama okanye ukukhanya. Oku kwenza ukuba ibunzi lesikhumba livuleke ngakumbi kwaye ngaphakathi kwepore nganye phakathi kwenani elikhulu lamasuntswana amdaka.
Ukunyamekela ulusu olunamafutha, kubalulekile ukuba uhlambe ubuso ngeveki ngesicoci. Zama ukusebenzisa iikhrimu zohlobo lwe-gel ezikukukhanya okukhanyayo okuthe ngqo kulusu olunamafutha.
Ngaphakathi kwindlela otya ngayo kubandakanya iziqhamo kunye nemifuno ukunqanda ezo ziqhotsiweyo eziza kukunika amanqatha amaninzi. Iintlanzi eziluhlaza kunye namandongomane njengeepistachios ziya kuba ngabahlobo bakho abalungileyo.
Ulusu lwam lomile, lomile kakhulu
Ukufumanisa ulusu olomileyo, kufuneka nje ngobunono usebenzise isikhonkwane sakho phezu kolusu, ukuba ishiya umzila omhlophe, unesikhumba esomileyo. Njengeziphumo zolusu olomileyo, sifumana isikhumba esimfiliba ngokurhawuzelela, ukuba bomvu kwaye nangakumbi emzimbeni. Ukuyinyamekela akukho nto ibhetele kunenye amanzi Iqhubekile nezithambiso ezithile zolusu olomileyo. Kubaluleke kakhulu ukuba emva kokucoca imihla ngemihla, xa usomisa ulusu, musa ukurhuqa ngetawuli, kuba oko kuya kuyomisa ngakumbi. Pat ulusu lwakho lomile kwaye mayibe lubumanzi kancinci ngaphambi kokufaka ukhilimu ukufezekisa umphumo omkhulu wokuhambisa amanzi.
Ngokutya, baya kukunceda ukutya okunotye ngamanzi njengepinapile, i-kiwi, i-strawberries, i-watermelon okanye i-orange kunye nemifuno eluhlaza. Kulumkele ikofu kunye nokusela ukumiliselwa okukunceda usele amanzi ngenye indlela.
Ulusu lwam luthuthuzela kwaye ludiniwe
Ndijonge esipilini kwaye ndineesangqa ezimnyama, iingxowa zamehlo nobuso obudiniweyo imini nobusuku, kwenzeka ntoni kum? Ndingawulungisa njani lo mba wobuso bam? Ulusu oludiniweyo luphawu lokuba ne ulongezo olongezelelekileyo lweeseli ezifileyo kulusu. Ukongeza, izangqa ezimnyama kunye neebhegi zibangelwa ukungabikho kokulala kunye nokuqokelela kwamanzi.
Ukunyamekela olu hlobo lolusu kunye ndikubuyisele onke amandla owadingayo, kwanele ukulandela ezinye iindlela ezinje nge ukukhutshwa ngeveki, amafutha okuthambisa nge iivithamini ezifana Vitamin C Ityebile kwii-antioxidants kwaye ibonelela ngexabiso leevithamini ulusu olusweleyo, kwaye kubaluleke kakhulu ukuba elinye lamahlakani akho ujikelezo lwamehlo for susa izangqa ezimnyama kunye neengxowa.
Naka u utya ntoni, kwaye ungalibali ukuthatha zonke iintlobo ze imifuno ebomvu, eorenji kunye etyheli, ezinenani elikhulu leevithamini kunye neeminerali ezinje ngeeorenji, iminqathe, ii-beet okanye amaqunube, amahlakani amakhulu e-antioxidant aya kuthi abuyisele ukuqaqamba kolusu lwakho ngokuqhwanyaza kweliso.
Ndinemibimbi ebusweni bam
Mi ulwalamano lwangaphandle lwamehlo nomlomo luzele imigca emihle ukuba yonke imihla iyabukhali kwaye iphele iyimibimbi. Kuqala babebonakala ngathi banomdla kum kuba bebamanqaku amancinci, kodwa ngokuhamba kwexesha, baye baba yimibimbi esiya siphawulwa ngakumbi nangakumbi ... Ndingenza ntoni?
Ubuso bethu buzele izihlunu ezincinci ezinceda ukushukuma nokuthethaOku, kunye nenyaniso yokuba amadoda athanda ukuthanda ngakumbi ukuziqhelanisa nemidlalo ngaphandle kokubeka ukhuseleko okanye ukuhambisa amanzi, kwenza yonke into ibe namandla ngakumbi.
Ukwenza le mibimbi incinci ijongeke kancinci, akukho nto ilunge ngaphezu kokuthanjiswa okufanelekileyo kukhuseleko lwelanga. Khumbula ukusebenzisa iimveliso ezinokhuselo unyaka wonke ukuze ulusu luzive lukhuselekile.
Kukho kwakhona ukutya okuza kukunceda njengabo bane uxinzelelo oluphezulu lwee polyphenols ezifana nengqolowa, iidiliya, iiblueberries, iimbotyi zesoya, ii-ertyisi, okanye iilentile.
Oko kwathiwa ... loluphi uhlobo lolusu onalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Loluphi ukhathalelo endilifunayo kuhlobo lolusu lwam?
Uhlobo lobuhlanga lwefashoni yasentwasahlobo ehlotyeni ngo-2013